Inqubomgomo Yokubuyisela Imali | I-TheOneSpy Software Trial Refund & Inqubomgomo Ebuyiselwe Imbuyiselo
Ikhaya Inqubomgomo yokukhokha nokubuyiselwa kwemali
Inqubomgomo yokukhokha yomsebenzisi weTheOneSpy ichazwe ngendlela enganciphisa izindlela zokukhokha nokufinyelela kubasebenzisi bethu. Le nqubomgomo isho kusukela ngosuku osibhalisile ukuze usebenzise i-TheOneSpy. Ngaphansi kwezimo ezithile, okungaziwa ngokuvamile, inqubomgomo ingashintshwa. Ukushintsha kuzokwaziswa kumsebenzisi. Uma nje ulwazi lunikezwa inqubomgomo entsha izolandelwa. Inqubomgomo yilezi:
Inkokhelo iqoqwe nge-Master Cards Master, i-Visa.
Uma kunjalo, kwamakhadi esikweletu, yonke imali ebhaliswe iBheji leKhadi kanye nezintela ezifanele zizokhokhiswa.
I-CyberSource / HBL ngumthengisi we-e-commerce ogunyaziwe weTheOneSpy.com. Ukuthengiselana kwakho kuzovela "TheOneSpy * Ox-I-Gen * 61290373846PK"Esitatimendeni sakho sekhadi lesikweletu.
Uma kwenzeka ukungahambisani nokukhokha noma yiziphi izinkokhelo ezivelele, i-akhawunti yomsebenzisi ingase ipheliswe okwesikhashana noma unomphela, noma ngabe kungaba yini isimo.
Uma umsebenzisi eceliwe ukukhokha, i-ultimatum iphela ngemuva 24 amahora, ngemuva kwalokho i-akhawunti izoqedwa okwesikhashana noma unomphela uma kwenzeka ilahlekile.
Uma imininingwane yokukhokha ye-End User ishintsha, kufanele saziswe mayelana noshintsho nge-imeyili ngenkathi zonke izinkokhelo ezivelele zingumthwalo womsebenzisi.
Uma ngabe ikhadi lesikweletu liphela ngenkathi ukusetshenziswa kweTheOneSpy, imali evelele yile mfanelo yomsebenzisi; silindele ulwazi olunembile kusuka kumsebenzisi.
I-akhawunti ngeke ivuselelwe ngokuzenzakalelayo njengoba singanikeli inketho yokuvuselela okuzenzakalelayo. Ngemuva kokuphelelwa isikhathi, umsebenzisi uzodingeka ukuthi ahambe ngenqubo yokuvuselela njengoba kwenziwa ngesikhathi sokuthenga okusha. Kungenziwa ngokusebenzisa ideshibhodi yomsebenzisi noma kusuka ekhasini le-Buy Now. Xhumana nokusekelwa kwamakhasimende uma ubhekene nanoma yiziphi izinkinga kule nqubo yokuvuselela
Inqubomgomo yokubuyisela imali yeTheOneSpy
NjengeNqubomgomo Yokukhokha, Inqubomgomo Yokubuyiselwa Kwe-TheOneSpy nayo ichazwe. Yenzelwe isithakazelo esihle sabasebenzisi bethu. Endabeni yanoma iyiphi inkinga engaxazulwanga ehambisana nohlelo lweTheOneSpy, inqubomgomo yokubuyiselwa imali iqala ukusebenza. Ngaphambi kokuthola inqubomgomo, qaphela ngomusa:
Amapulatifomu we-OS kanye nesiphequluli sewebhu esisekelwe:
I-TheneneSpy ayisebenzisiwe kuzo zonke izigcawu. Ixhaswa kuphela i-Android, iOS, ne-BlackBerry. Ngakho ngaphambi kokwenza noma yikuphi ukuthenga ngomusa qinisekisa ukuthi ipulatifomu yakho yedivayisi isekela uhlelo lokusebenza.
Isicelo se-TheOneSpy singalandwa kuphela ngokusebenzisa “I-Mozilla Firefox“ kumadivayisi we-Android.
Ekuqaleni, umsebenzisi kufanele afake uhlelo lokusebenza futhi kamuva ekusebenzeni kwe-TheOneSpy amasevisi.
Ekupheleni kosuku, uthola noma yiziphi izinkinga zobuchwepheshe ngezici ezithile eziceliwe, umsebenzisi angathintana nommeleli wokunakekelwa kwamakhasimende phakathi namahora we-24 ukulungisa izinkinga noma ukucela imali yokubuyiselwa imali-uma engaqiniseki kahle.
Uma kwenzeka umsebenzisi engafaki uhlelo lokusebenza futhi afuna ukubuyiselwa kwemali, khona-ke ukubuyiselwa imali ngeke kwenziwe kungakhathaliseki uma ecela phakathi kwamahora we-24.
Umsebenzisi kufanele asho isizathu sokubuyisela imali ngemininingwane ngesikhathi sokucela ukubuyiselwa imali. Imininingwane iyimpoqo lapho ukuhlolwa kwephesenti yokubuyiselwa kwemali kuzobalwa ngokufanele.
Isicelo sokubuyiselwa emuva ngemuva kwamahora we-24 ngeke asamukele.
Qaphela: Isicelo kufanele senziwe ngaphakathi kwamahora angu-24 ngumsebenzisi. Isicelo sokubuyiselwa imali sizobe sijabule kuphela uma umsebenzisi ebhekene nekhinga lobuchwepheshe nezinsizakalo zeTheOneSpy.
Inqubomgomo ye-Lump Sum Return:
Uma isici esingasabeli sitholakale ngenxa yokungasekelwa kudivayisi, i-40% ibuyiselwa imali.
Uma umsebenzisi engasenasithakazelo ekusebenziseni uhlelo lokusebenza ngemuva kokuthenga, noma ukuthenga uhlelo lokusebenza ngokungalungile noma ukuguqula kwengqondo, i-0% ibuyiswa ngisho nomsebenzisi ewela ngaphansi kokufaneleka kwembuyiselo yamahora we-24 asikhiphi ukubuyiselwa kwemali engqondweni futhi ukushintsha kwenhliziyo. Uma ngabe ubhekene nanoma yiziphi izinkinga zobuchwepheshe ngeTheOneSpy Software ke silapha ukuze sisebenze nawe futhi sixazulule izinkinga ukuze ujabulele isipiliyoni sokuqapha esingenamkhawulo.
Uma umsebenzisi we-iPhone engathandeki ku-jailbreak idivayisi yakhe ngemuva kokukwazi ukuthi lolu hlelo lokusebenza ludinga idivayisi ye-jailbroken futhi umsebenzisi uwe ngaphansi kwenqubomgomo yokubuyiselwa kwehora lama-24 bese i-45% yenkokhelo ibuyiselwa.
Uma umsebenzisi we-Android engazimisele ukugxila idivaysi ye-Android yohlelo lokusebenza futhi uwela ngaphansi kwenqubomgomo yokubuyiselwa kwamahora kwe-24 bese i-20% yembuyiselo yenziwe.
Uma ngabe umsebenzisi efaka futhi asebenze uhlelo lokusebenza kudivayisi ehlosiwe futhi ecela ukubuyiselwa imali ngaphakathi kwamahora we-24 wokuthenga, khona-ke uzothola i-40% ekubuyiselweni kwemali.
Uma umsebenzisi esho lokho, akazange aphumelele ukufaka uhlelo lokusebenza kudivayisi yakhe ehlosiwe futhi umhlahlandlela wokufaka ividiyo unzima kakhulu kuye ukuze aqhubeke nenqubo yokufaka, bese i-20% izobuyiselwa uma isicelo senziwe ngaphakathi izinsuku ezintathu zokuthenga.
Ukuhlinzeka ngezinsuku ezengeziwe:
Uma umsebenzisi engatholi ithuba lokufaka i-TheOneSpy kudivayisi eqondisiwe ngemuva kokuthenga kwayo ngenxa yanoma yisiphi isizathu, khona-ke angathintana nommeleli weqembu lokusekela amakhasimende. Ezimweni ezinje, sinikeza isandiso ekufakweni kuze kube yizinsuku ezingu-15.
Umsebenzisi angakwazi ukufaka isicelo sokubuyiselwa imali ngokuthumela i-imeyili ukusekela@theonespy.com, eyamukeleka nguMnyango Wokuthengisa.
Ngemuva kokuthumela isicelo sokubuyiselwa kwemali Imeyili, sicela uzise noma yimuphi umsizi wethu wokusekela nge-intanethi ngokushesha ngenqubo yokubuyisela imali.
Ngomusa qiniseka ukuthi akukho sicelo esenziwe phezu kwengxoxo yokusekela.
Inqubo yokubuyiselwa kwemali ithatha i-1 ezinsukwini zokusebenza zokusebenza ze-3, ukubalwa phakathi koMsombuluko kuya kuLwesihlanu.
Qaphela: Sigcina ilungelo lokubuyisela umyalelo futhi sinqamule ukwesekwa nezinsizakalo uma usenqabela noma sithole ukuthi usebenzisa le nsizakalo yezizathu ezingavunyelwe.
- Isibuyekezo sokugcina: 27 August 2018.